+२ गरेकालाई ७० हजार तलव ! विश्व स्वास्थ्य संगठनमा खुल्यो यस्तो आकर्षक जागिर, वृस्तृतमा हेर्नुहोस् !
ARCHIVE, JOB » +२ गरेकालाई ७० हजार तलव ! विश्व स्वास्थ्य संगठनमा खुल्यो यस्तो आकर्षक जागिर, वृस्तृतमा हेर्नुहोस् !
काठमाडौँ- विश्व स्वास्थ्य संगठनमा जागिरको निकै राम्रो अवसर आएको छ । २०१७-१२--२७ तारिखमा एक सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै संगठनले आकर्षक जागिरको अवसर खुलाएको हो । Administrative & Finance Assistant पदको उक्त जागिरमा ७० हजार प्रति महिना तलव छ भने यो जागिर एक बर्षको करारको हुनेछ । २०१८ जनवरी १७ तारिखसम्म यो जागिरमा आवेदन दिन सकिन्छ ।
प्लस टु पास गरेकालेसमेत आवेदन दिन सक्ने यो जागिरमा माथि उल्लेखित मिति भित्र senepipdvacancy@who.int मा आफ्नो बायोडाटा मेल गर्न सकिनेछ । अन्य जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठनको आधिकारिक वेवसाइटमा गएर लिन सकिन्छ ।